မိမိတည်နေရာကို ဘယ်လိုမျှဝေရမလဲ (တိုက်ရိုက်) – Driver
အကောင့်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ
မိမိတည်နေရာကို ဘယ်လိုမျှဝေရမလဲ (တိုက်ရိုက်)
သင့်ရဲ့တည်နေရာကို ချစ်ခင်ရသူများနှင့် မျှဝေထားခြင်းဖြင့် စိတ်အေးချမ်းစွာဖြင့်မောင်းနှင်လိုက်ပါ။
အမှတ်အသားကိုနှိပ်၍ Send Link ကိုရွေးချယ်ပါ
SMS Emergency Contacts (အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်များကို စာတိုပေးပို့ခြင်း) ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လဲ နောက်အဆင့်သို့ ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်
လင့်ခ် ကိုသင်ပိုမိုနှစ်သက်သော app ကိုရွေးချယ်ပြီး ချစ်ခင်ရသူများကို ပေးပို့လိုက်ပါ။
သင့်တည်နေရာမျှဝေနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် အမှတ်အသားကို နှိပ်၍ Stop Sharing Location ကိုရွေးချယ်ပါ။
အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် “Available” အခြေအနေမှ “Offline” သို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြင့်လဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို သင် online ဖြစ်နေ၍ အလုပ်များလက်ခံရန်အသင့် available ဖြစ်နေစဉ်တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခလုပ်ကို ခရီးစဉ်ပြင်ပ အချိန်တွင်နှိပ်မိပါက ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ?
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အလုပ်လက်ခံထားချိန်မဟုတ်လျင်ပင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သတိပေးချက် စာတိုများမှာ မိမိ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်မှ ပေးပို့သွားမှာလား ?
သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြုသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာတိုများအားလုံးကို Grab မှသင့်ကိုယ်စားပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီး ကျသင့်သည်များကိုလဲ Grab မှသာကျခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာတိုသတိပေးချက်များကို မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့် ပေးပို့သွားမှာလဲ ?
စာတိုသတိပေးချက်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာတိုသတိပေးချက် ပေးပို့ခြင်းပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိရဲ့အရေးပေါ် အဆက်အသွယ်မှ လက်ခံရရှိကြောင်းကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
ပေးပို့ခြင်းပြုလုပ်ပြီးပါက စာတိုပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို အမှန်ခြစ် ဖြင့်ဖေါ်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထိုအမှန်ခြစ်မှာ ဖတ်ရှုပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ ဖေါ်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
အရေးပေါ် အဆက်အသွယ်များ ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ?
အပါတ်စဉ် ဘေးကင်းစေရေးဆိုင်ရာ သတင်းပေးပို့ချက်